သူရဲ့ အိုင်ဒေါ မင်းသားချောနေတိုးနဲ့အတူ Music series (၃) ပုဒ်ကို ရိုက်ကူးနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်အဆိုတော် ‘အေးမြဖြူ’.. – Shwe Naung
သူရဲ့ အိုင်ဒေါ မင်းသားချောနေတိုးနဲ့အတူ Music series (၃) ပုဒ်ကို ရိုက်ကူးနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်အဆိုတော် ‘အေးမြဖြူ’..
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ တက်သစ်စ အဆိုတော်မလေးဖြစ်တဲ့ ‘အေးမြဖြူ’ကိုတော့ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ မြန်မာအိုင်ဒေါ ပြိုင်ပွဲက ‘Top3‘တစ်ယောက် အဖြစ်သိကြသလို ငယ်စဉ် ကတည်းက သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက် အဖြစ်လည်း ချစ် ပရိသတ်တွေ ရင်းနှီးကြမှာပါ။
အခု လည်း သူမချစ်တဲ့ အနုပညာ အလုပ်တွေကိုဆက်တိုက် လုပ်ဆောင် နေတာဖြစ်ပြီး ချစ် ပရိသတ် တွေရဲ့ အားပေးမှုလည်း အခိုင်အမာရရှိထားသူလေးပါနော်။
အောင်မြင်ကာစ အဆိုတော် အသစ်လေး ‘အေးမြဖြူ’ကတော့ မြန်မာအိုင်ဒေါ ပြိုင်ပွဲပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ သီချင်းအသစ် တစ်ပုဒ်ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အဆွေးသီချင်းလေး နာမည်ကတော့ “ လွမ်းနေလို့ ” ဖြစ်ပြီး ချစ် ပရိသတ်အာပေးမှု များစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း ချစ်ရတဲ့ချစ် ပရိတ်သတ်တွေ နားဆင်ဖို့ သီချင်းအသစ် အတွက်ပြင်ဆင် နေတဲ့အကြောင်းကို ပြောပြ လာတာပါ..။
သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် ‘အေးမြဖြူ’ကတော့ သူလေးစားအားကျရတဲ့ အိုင်ဒေါ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ‘မင်းသားချောနေတိုး’နဲ့အတူ’ Music series’ (၃) ပုဒ်ကို ရိုက်ကူးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်ကနေ တစ်ဆင့်ပရိသတ်တွေကို အသိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဖတ်ရှူ့ပေးကြတဲ့ ချစ် ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
Source : AyeMyaPhyu
ချစ် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ တက်သစ်စ အဆိုတော်မလေးဖြစ်တဲ့ ‘အေးမြဖြူ’ကိုတော့ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ မြန်မာအိုင်ဒေါ ပြိုင်ပွဲက ‘Top3‘တစ်ယောက် အဖြစ်သိကြသလို ငယ်စဉ် ကတည်းက သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက် အဖြစ်လည်း ချစ် ပရိသတ်တွေ ရင်းနှီးကြမှာပါ။
ဆီးချိုရောဂါနဲ့ နှလုံးရောဂါ အခံတွေ ရှိနေတဲ့ ဝါရင့် သရုပ်ဆောင်ကြီး ဦးမိုးဒီ တစ်ယောက် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက်ခံရ
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ အမိုက်စား ခန္ဒာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ……..
မော်ဒယ်လ် Lလစ်ရှားရဲ. အလှအပ ပုံရိပ်များ….
အဆိုတော် ချမ်းချမ်းရဲ့ ပုံလေးများ…….